Kunze Maitiro | Yangu Mota Kunze
NDERIPI MATANHU EKUpinza MOTA YAKO KUUNITED KINGDOM? Zvichienderana negwara rako rekunyoresa rinogona kusiyana. Isu tinovavarira kukupa zano rekuti chii chinobatanidzwa kana iwe wawana quotation.
PaMotokari Yangu Kunze tinopa iyo yakasarudzika sevhisi yekubata zvizere zvido zvako uchinounza mota kuUK kubva chero kupi pasi. Nemakore mazhinji ruzivo rwekutengesa kuendesa kunze kwenyika uye kuburitsa mota kutenderera pasirese, tinoona kuomesa kwemaitiro acho kana usina ruzivo rwemberi. Tiri pano kuti tibatsire uye tinofara kukupa iwe inokurumidza, hushamwari, sevhisi sevhisi kusangana neyako chaiyo mota yekupinza zvinodiwa.
Pazasi pemaitiro ekunze ekupinza anoitwa nemotokari zhinji, ayo atinopa asi isu tinogona kubatsira nezvakawanda kana zvishoma sezvamunoda uye mota dzese dzinosiyana. Saka usazeze kuwana mukana wekubata chitaurwa.
Nzvimbo & Ruzivo rweMotokari
Let us where your car is, chero kupi zvako pasi pamwe neruzivo rwemota yako uchishandisa yedu quote fomu. Quote bespoke inoiswa pamwe chete iyo inotora mukutarisa mitengo yazvino yekutumira uye zvakasarudzika zvinodikanwa kunyoresa mota yako. Paunenge iwe wafara nekotesheni, isu tinokwanisa kutanga iyo yekumhanyisa maitiro eako mota.
Logistics & Global Zvifambiso
Isu tinoronga kuunganidzwa kwemotokari yako kuchiteshi chepedyo chepasi rose kana nhandare yendege uye tinoronga kutakura kwemakungwa kana kutakura nzira yemotokari yako kuenda kuUK. Nguva mafuremu anosiyana zvichienderana nenyika yaakabva uye nzira yekufambisa
Tsika & Dhirivhari
Isu tinojekesa mota yako kuburikidza neUK Customs uye tinopedzisa yako Notification yekuuya kwemotokari neHMRC. Kana mota yako yakarongerwa kugadzirisa tichaunganidza mota yako toiendesa kunzvimbo yedu kuCastle Donington. Kana iwe uri kusarudza kunyoresa mota yako uri kure ipapo ichaendeswa kwauri.
Kugadziriswa & Kuedzwa
Kana mota yako ichida muyedzo weIVA tichaita IVA test application kuVOSA panzvimbo yako. Isu tobva tagadzirira mota yako kuti isangane neUK migwagwa zviyero kuona kuti zviri pamutemo nzira. MOT inoitwa kuti ive nechokwadi chekuti kunze kwekuteerera, zvakachengeteka kushandisa. Motokari yako inofambidzana nemuyedzo wayo weIVA nehunyanzvi vedu vakadzidziswa mune yedu nyowani nyowani ISO 17025 yekuyedza nzvimbo yekuyedza. Munguva yekuita uku, mota yako yakazara inshuwarisi.
Isu tinotumira kunyoresa kwako kunyorera kuDVLA nemhedzisiro yekuyedza mhedzisiro uye humbowo hwekuteerera. Mota yako yobva yagadzirira kuunganidzwa kana kuendeswa neRegistration mahwendefa uye mutero wemugwagwa, zvizere UK mugwagwa zviri pamutemo.